Qiimeynta Ciyaartoyda Kulankii Ay Man United Guuldarada Kala Kulantay West Ham - Xiddiga Garoonka, Xiddigaha Fashilmay & Xogta Laga Diiwaangeliyay Kulankaan | Laacib.net
Qiimeynta Ciyaartoyda Kulankii Ay Man United Guuldarada Kala Kulantay West Ham – Xiddiga Garoonka, Xiddigaha Fashilmay & Xogta Laga Diiwaangeliyay Kulankaan
Ka dib labo guul oo isku xigta oo ay gaareen Red Devils ayaa heysatay fursad ay guulaha ku sii dheereysato, laakiin waxaa mar kale lagu soo dubtay garoonka London Stadium oo markaan ay West Ham United ku soo garaacday 2-0.
Laga soo bilaabo seerigii ugu horeeyay ciyaarta, Man United waxay u muuqdeen kuwa caajis iyo xiiso la’aan uu ka muuqdo. Haddii ay kulankaan badin lahaayeen waxay soo geli lahaayeen kaalinta seddexaad, taaso bedelkeeda West Ham ayaa kaalinta afaraad ku soo gashay guusheeda.
Dhaawacyada ayaa ku sii kordhay Manchester United gaar ahaan weerarka. Mason Greenwood, Anthony Martial iyo Rashford oo kulankaan dhaawacmay – Romelu Lukaku marnaba looma helin bedel. Iyagoo qarashgareeyay 900 milyan ginni sannadihii ugu danbeeyay, Solskjaer ayaa weeraryahanka kaliya ee uu heysto waa Lingard ka hor kulanka Arsenal.
Mark Noble (West Ham United): Qaab ciyaareed cajiib ah ayuu ku soo bandhigay khadka dhexe xiddiga halyeeyga West Ham. Shaqo adeeg ayuu muujiyay. Waxa uu dejiyay laxanka ciyaarta ee khadka dhexe. Xiddigaha kale ee ismuujiyay waxaa ka mid ah Cresswell, Rice iyo Yarmolenko oo qiimeyn sarray helay.
Goolhaye David de Gea kulankii 11aad oo isku xiga oo ay marti yihiin Premier League ayaa shabaqa laga soo taabtay, taasoo ah rikoor xun oo loo diiwaangeliyo mid ka mid ah goolhayayaasha ugu fiican caalamka. Juan Mata, Pereira, Matic iyo Lindelof ayaa iyagana ah xiddigaha ugu qaabka ciyaareedka liitay.
West Ham: Fabianski 6, Fredericks 7, Diop 7, Ogbonna 7, Cresswell 8, Rice 8, Noble 9, Fornals 7, Yarmolenko 8, Anderson 7, Haller 6.
Bedel: Zabaleta n/a, Wilshere 5, Snodgrass n/a.
Manchester United: De Gea 5, Wan-Bissaka 6, Young 6, Maguire 6, Lindelof 5, Matic 5, McTominay 6, Mata 5, Pereira 5, James 6, Rashford 4.
Bedel: Fred 4, Gomes n/a, Lingard 5.
Xogta laga diiwaangeliyay kulankaan
Tan iyo markii uu badiyay sagaalkii kulan ee ugu horeysay ee uu marti ahaa, tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku guuldareystay inuu badiyo sagaalkii kulan ee ugu danbeeyay ee Man United ay marti aheyd.
Manuel Pellegrini waa tababarihii ugu horeeyay ee afar tababarayaal kala duwan oo Manchester United ah ka badiya horyaalka Premier League (Moyes, van Gaal, Mourinho iyo Solskjaer).
Manchester United ayaa ku guuldareysatay iany shabaqa ilaashato 11kii kulan ee ugu danbeeyay ee ay marti ahaayeen tartamada oo dhan, waana rikoorkoodii ugu xumaa tan iyo markii ay 14 kulan shabaqa ay ilaashan waayeen intii u dhaxeysay April iyo December 2002.
Tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii 2011-12, David de Gea ayaa laga dhaliyay goolashii ugu badnaa ee laadad xor ah ee laga dhaliyo goolhaye kale isagoo laga dhaliyay 12 laadad xor ah.